Warbixin:- Maxaad ka ogtahay eeygii loo adeegsaday dilka hogaamiyihii Daacish – Kismaayo24 News Agency
Warbixin:- Maxaad ka ogtahay eeygii loo adeegsaday dilka hogaamiyihii Daacish
by admin 29th October 2019 065
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in Al Baqdaadi uu ku cararay god dhulka hoostiisa ku yaala, ka dib markii ciidamada ay gudaha usoo galeen gurigii uu deganaa. Al Baqdaadi ayaa horay u kaxeysaty saddex caruur ah oo dhintay markii uu is qarxiyay.
“Wuxuu tegay halkii ugu dambeesay ee godka, waxaana eryanayay eeyga, wuxuu qaraxiyay jaakadii uu xirnaa, waxaana halkaas sidoo kale ku dhintay saddexdii caruur iyo isaga, jirkiisa waxaa gogooyay qaraxa,” ayuu yiri Trump oo fahfaahinayay qaabkii uu u dhintay Al Baqdaadi.
Eeyga ka qeyb qaatay hawlgalka ee dhaawcmay ayaa ah nooc ka mid ah eeyda lagu magacaabo K-9, kaas oo markii uu dhaawacmay ay dib ula soo noqdeen ciidanka Mareykanka.
Muxuu yahay eeyga loo adeegsaday howlgalka?
Eeygan oo lagu magacaabo Cairo ayaa ah xayawaan u tababaran sida ciidamada kumaandoosta, wuxuuna awood u leeyahay in uu uriyo qaraxyada iyo waxyaabo kale.
Ciidamada Mareykanka ayaa eeygan u adeegsaday weerarkii ay ku dileen hogaamiyaha kooxda la baxday Khilafada Islaamka, Al Baqdaadi. Waa nooc ka mid ah eeyda loo adeegsaday hawlgalkii ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Belgian Malinois.
Ron Aiello, oo ah sarkaal hawlgab ah, horayna uga tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka, haatanna madax ka ah shirkad carbisa eeyda dagaalka loo adeegsado ayaa wargeyska the New York times u sheegay in K-9 ay yihiin laba nooc oo kala ah German shepherd iyo Belgian Malinois, kuwaas oo inta badan loo adeegsado hawlgalada ammaanka ee ay qaadaan ciidamada militariga.
Eeydan ayuu sheegay in ay yihiin kuwa awood u leh in ay uriyaan qaraxyada, kana qeyb qaadan karaan hawlgalada sida ciidanka kumaandoosta ah oo kale.
“Haddii ay ciidanka Mareykanka qaadayaan hawlgal, waxay u baahan yihiin eey urin kara qaraxyada, sidoo kalena wax iska dhicin kara.” Ayuu yiri Mr Aiello.
Eeyda noocan oo kale ah ayaa heysta tababar heer sare ah, waana kuwa fulin kara weerarro, sidoo kalena qofka ku dili kara daqiiqado.
Sanadihii dambe waxaa aad looga deyrinayay tirada eeyda u tababaran qaabka ciidamada gaarka ah, kuwaas oo la sheegay in ay aad u yar yihiin, si weynna loogu baahan yahay, maadaama dunida ay kusoo bateen weerarada ay qaadaan kooxaha lagu tilmaamo argagixisada.
Qiimaha mid ka mid ah eeyda noocan oo aan tababarneyn ayaa lagu sheegaa in uu ka badan yahay 25 kun oo doolar, waxaanna ku rakiban qalab militari oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaakado ka celiya biyaha, leyrarka iyo kaamerooyinka sahlaya in qofka hagayo uu la socdo hawlgalka ay sameynayaan.
Wargeyska The Bloomberg ayaa kusoo warramay in mid ka mid ah eeyda K-9 ee aad u tababaran, qalabkiisana uu u dhameystiran yahay uu qiimahiisa gaarayo 283 kun oo doolar.
Eeydan ayuu Mr Aiello sheegay in marka si wanaagsan loo tababaro ay ban’iaadamka kaga wanaagsan yihiin xagga ammaanka ee urinta walxa qarxa iyo qalabka casriga ah ee loo farsameeyo in ay ogaadaan qaraxyada iyo waxyaabaha amni darrida keeni kara.
“Anagu ma sameyn karno waxa eeydaas ay sameynayaan”, ayuu yiri Aiello, oo 1966-dii qeyb ka ahaa askar Amerikaan ah oo la geeyay dalka Vietnam, kuwaas oo watay eeyda dagaalka.
Waxaa kale oo uu sheegay in eeydan ay sidoo kale u tababaran yihiin in ay badbaadiyaan nafsadda qofka ban’aadamka.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in uu shaqo wanaagsan qabtay eeyga lagu magacaabo Cairo ee ka qeyb qaatay dilkii hogaamiyaha kooxda IS.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama oo hadlay bilo ka dib dilkii hogaamiyihii Al Qaacida Osama Bin Laden, ayaa sheegay in uu doonayo in uu la kulmo eeygii ka qeyb galay hawlgalkii lagu dilay dilka Osama Bin Laden, kaas oo markii dambe uu la kulmay.
Madaxweynaha Puntland Oo ka Tacsiyadeeyay Dadkii ku Dhintay Waxyeelada Fatahaadda Wabiga Shabeelle
XOG: Dowlada Uganda oo loogudbiyay cadeymaha haraadiga meydkii Taliyahii Booliiska Amisom
Ha Murgoon, Fariin Ka Timid Gabadh Aad U Da' Yar Oo Lix Sano Jir 'Dhambaal Qalbigaga Badalayo'.
admin 13th June 2014 28th August 2015
Hay’adda Nabadsugidda oo faah faahin ka bixisay weerarkii Baardheere
admin 23rd June 2015 27th August 2015
RW Cumar Cabdirashiid oo Boosaaso kusoo Wajahan kana qayb galaya Furitaanka Garoonka Boosaso
Tifaftiraha K24 4th January 2016